Shiinaha Fudud Fudud Aluminium Foosha Induction Khatimidii Warshad Liner iyo alaableyda | 名 / 公司 名
Kani waa hal shey oo xarig ah induction liner, ma laha keyd ama lakab labaad, waxaa lagu dabooli karaa weelka mashiinka induction induction ama birta korontada si toos ah. Waxay ku siin kartaa shaabad adag dhalada caagga ah ama weelka dhalada ah ayaa lagu wada saari karaa gabalka oo dhan, mana jiro wax haraaga oo ku yaal bushimaha weelka.
Micnaha iyo shaqeynta dahaadhka dahaadhka dahaadhka dahaadhka, badanaa loo yaqaan dahaadhka daboolka, waxaa loola jeedaa daboolka iyo walxaha dahaarka ah oo soo saari kara saameyn adag oo xidhitaanka weelka. Halkan, weelasha waxaa loola jeedaa dhalooyinka quraaradaha, dhalooyinka caagga ah iyo gasacadaha birta ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo daboollo ah, oo ay ku jiraan daboolka daboolka, daboolka jiidaha, daboolka koofiyadaha, koofiyadaha jilicsan, daboolka cadaadiska. Qalabka dahaadhka waxaa loola jeedaa qalabka xiri karaya daboolka iyo weelka si adag, Qalabka leh shuruudaha qaarkood iyo qeexitaannada gabi ahaanba waa kuwo aan lahayn daadasho. Si loo hubiyo in waxqabadka alaabada xirmaysan aan isbeddelin, tusaale ahaan, haddii daboolka loo isticmaalo oo keliya oo aysan jirin dahaadh xagga hoose ee daboolka, saameynta daboolida way adag tahay in la gaaro. Shaqada dahaadhku waa weyn tahay
Wax ceyriin: bireedka Aluminium, filim, dhejiska, khad, dareeraha, iwm.
Lakabka daboolka: PS, PP, PET, ama PE
Dhumucdiisuna waxay Standard: 0.24-0.38mm
Ballaca Heerka: 9mm - 182mm
Gaar ahaan baakadaha nadiifka ah.
Aluminium daboolaya xirmooyinka xirmooyinka kala duwan, PET / HDPE / PP / PS / PVC dhalooyinka iyo dhalooyinka quraaradaha ah.
Xirmooyinka kuleylka kuleylka waxay leeyihiin awood xasilloon oo lagu xiro inta badan weelasha.
1. Khatimidii ugaarsiga
2. Kahortag qubashada qaaliga ah
3. Iska yaree halista wax-yeelidda, barkin-badeedka, iyo wasakhda
4.Kordhi nolosha nolosha
5. Abuur shaabad hermetic ah
6. Deegaanka oo saaxiibtinimo leh
Hore: Qaad 'N' Peel
Xiga: Hal-xabbad oo kuleylinta kuleylinta kuleyliyaha xariiqa leh Safka